Khaing Min Khant-ခိုင်မင်းခန့်, Kalong Khong Phasi Charoen, Bangkok (2022)
Khaing Min Khant-ခိုင်မင်းခန့်
ဇွဲလုံးလနဲ့ အလေးထိုးပြီး အောင်ပွဲခံပါ
ငါ စမ်းဖီစမ်းဖမ်း လမ်းပျောက်ရဖို့လား ပုယေ......
User busy နန့်ကာရန်းစီးနီရေဖုန်းမှာ
ငါ့ နှလုံးသားကို မှော်လောင်တိုက်သွင်းဖို့သိလား ပုယေ??????
Khaing Min Khant-ခိုင်မင်းခန့် updated their info in the about section.
လက်ရှိအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးနဲ့ AA ရပ်တည်ချက်
Pro- ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) က ဘာလို့ အာဏာသိမ်းစစ်တပ် ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မပါရတာပါလဲ။ ဒီကိစ္စမှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်က ဘာပါလဲ။
AA- ကျနော်တို့ရဲ့ မူလရည်မှန်းချက်က "ရက္ခိတလမ်းစဉ်"၊ ဆုံးရှုံးထားတဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာပြန်လည်ရယူရေးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မျုိးဆက်တွေက ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ အချိန်တွေကုန်ဆုံး၊ လမ်းပျောက်ခဲ့ရတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်း၊ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကို ထောက်ခံပြီး နောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်တွေက နိုင်ငံရေးမှာ ချောင်ထိုးခံလိုက်ရတယ်။ ရခိုင်တွေက ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ လှုပ်ရှားရေးမှာလည်း ပါခဲ့ကြသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီရဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုလည်း ဘာမှ မခံစားခဲ့ရကြပါဘူး။ အဲဒီလို အတွေ့အကြုံတွေများလာတဲ့အခါ ကျနော်တို့မျိုးဆက်မှာ ဗမာနောက်လိုက် ( နိုင်ငံရေး) မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်မျှော်မှန်းချက်ကိုပဲ အကောင်အထည်ဖော်ချင်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ရဲ့ ခပ်ဝေးဝေးကနေ ရပ်ပြီး ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်တဲ့ ဗမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်လှုပ်ရှားတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ကျနော်ပြောလိုတာက ကျနော်တို့ ရပ်တည်ချက်က ပါးနပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းပဲ ဗမာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာ မငြိမ်မသက်တွေဖြစ်နေပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိနေတာပါပဲ။
** ပတ်ဝန်းကျင်အရှုံး ကိုယ့်အပြုံး **
"လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့အစွမ်းအစကို ၁၀ ရာနှုန်းကနေ
၁၂ ရာနှုန်းသာအသုံးချကြတယ်လို့ဝီလီယံဂျိမ်းစ်က "ဆိုပါတယ်
နာ့ခ်ဟာ မွေးကတည်းက လက်နှစ်ဖက်လုံးမပါခဲ့သလို ခြေတောက်နှစ်ဖက်လုံးမှာလည်း ခြေတောက်အတတ်ကလေးတစ်ဖက်သာပါတယ်၊သူဟာ ရေကူးတတ်တယ်၊ဘောလုံးကန်တတ်တယ်၊နောက်ဆုံး သာမန်လူတွေလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဟူသမျှကို လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ဒါ့ကြောင့်လည်းပဲ သူဟာ ကမ္ဘာကျော်လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သလို လှပတဲ့ဇနီးချောနဲ့ ပျော်ရွင်စရာမိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
၂ ဆကြိုးစားနိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လိုက်ပါ
မိတ်ဆွေဟာ တစ်နေ့ကို ၈ နာရီအပ်စက်ပေမယ့်
တစ်နေ့ကို ၄ နာရီသာအိပ်စက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
## Never give up##
ဆိပ်ကမ်းမှာကျောက်ချထားတဲ့ ဘဝသ‌င်းဘောဟာသံချေးတတ်ပြီး ပျက်စီးသွားရမှာပဲ
Consistency to finish your work
🍁အလုပ်တစ်ခုကို ငါ မလုပ်နိူင်ပါဘူးလို့
ငါ မမေ့နိူင်ပါဘူးလို့ မတွေးပါနဲ့။
ငါ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်မလာနိူင်ပါဘူးလို့
🍁ကိုယ့်မှာ တီးတိုးဖော် မရှိတော့လို့
ငါ တစ်ယောက်တည်း မနေနိူင်ပါဘူးလို့ မတွေးပါနဲ့။
ငါ့ ဘဝက အဓိပ္ပါယ်မဲ့သွားပီလို့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသုံးမကျတဲ့သူပါလားလို့ မတွေးပါနဲ့။
ငါ့ဘဝက ဘယ်တော့မှ ကံမကောင်းနိူင်ပါဘူးလို့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့။
ငါ့ဘဝက ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်ပီလို့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့။
🍁အဲ့ဒီလို တွေးလိုက်မိပီဆိုတာနဲ့ သင့် ဘဝက
သူတို့မှာရှိနေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်နဲ့ လောကကြီးကို
🍁အဆင်မပြေမှူတွေ ၊ နှလုံးသားရဲ့ ခံစားမှူတွေ
ဖိစီးနှိပ်စက်ခံရတိုင်း ဘဝကို ရေစုန်မျောနေမိရင်
လောကကြီးက မင်းကို ကောင်းချီးပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
မင်းဟာ တန်ဖိုးမဲ့ လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာပီး
လူ့လောကကို လက်ကမ်းကြိုဆိုခဲ့တဲ့ မိဘမျက်နှာကို
🍁ငါ မလုပ်နိူင်ဘူး ၊ မဖြစ်နိူင်ဘူးလို့
တွေးတဲ့နေ့က မင်း သေသွားတဲ့နေ့ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။
🍁ခံစားချက်တွေ များလွန်းလို့ မခံမရပ်နိူင်ဖြစ်နေရင်
ပီးရင်တော့ ပြုံးနိူင်အောင် ကြိုးစားပါနော်။
Photos from သုခမိန် စာပေနှင့်စာရေးကိရိယာ -စစ်တွေ's post
Photos from စာပေလောက Pansodan Junction City's post
@@@ အပြာရောင်ဗိုင်းရပ်စ် @@@
တွေ့တယ်. . . . . . . . .
တွေ့တယ်. . . . . . . . . .
ဟီရိ သြတ္တပ္ပအတောင်ပျံကျိုးနေတဲ့ လင်းတတွေကြောင့်
ပေးပါ ပေးပါ ပေးပါ
ငြမ်းချမ်းရေးတေးတစ်ပုဒ် ကို ထုဆစ်ခွင့်ပေးပါ။
၂၁ ၁၂ ၂၀၁၇
## ပညာရပ်တစ်ခုဧ့ ပုံသွင်းခြင်းခံရရေ ရခိုင့်လူငယ်များသို့ #$
ကုလားရခိုင်အရေးခြင်းနောက်ပိုင် NGO တိကပီးရေ နိုင်ငံရီးသင်တန်း ကျားမတန်းတူရီး လူ့အခွင့်ရီးစရေသင်တန်းတိကိုရခိုင်မှာအများကြီးပီးလာစွာတိကိုတွိရရေ လူငယ်တိအတွက် အများကြီးဗဟုသုတရရေပိုင် အများကြီးလေ့အကျိုးရှိပါရေ၊ယေကေလေ့ တစ်ချို့လူငေတိရေ ယင်းသင်တန်းတိကရရေအသိသုတတိကို ကိုယ့်လူမှုပတ်ဝိုင်းကျင်နန့်လက်လျော့ညီထွေဖြစ်အောင်အသုံးမချတတ်ပဲ တိုက်ရိုက်ကူးလိုက်တေခါ တစ်ချို့နီရာတိမှာ မိမိဧ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နန့်ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြိုက်လာတတ်ပါရေ။
လူ့အခွင့်ရီးတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊အမျိုးသမီးအခွင့်ရီးတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူတိက Human right၊Women right ရို့ကို အလေးနက်တန်ဖိုးထားပနာပြောနီကတ်ကေလေ့သော့ Culture right ကိုကျော်ဖို့ကြိုးစားကတ်တေခါ မိမိဧ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နန့်ဆန်ကျင်ဖက်လားဖြိုက်တေ၊သေချာစွာကတော့ခါ သီအိုရီတစ်ခုကို နီရာတိုင်းမှာလားပြီးကေကျင့်သုံးဖို့ဆိုစွာက အခက်ခဲတိအများကြီးဟိပါဖို့၊ယင်းနန့်မိမိရို့နားလည်တတ်သိထားရေပညာရပ်တိကို မိမိရို့လူမှုပတ်ဝိုင်းကျင်လှပသာယာဖို့ အံဝင်ဂွင်ကျအောင်လက်ခံကျင့်သုံးသောအားဖြင့် ပိုမိုကေါင်းမွန်ရေရလာဒ်တိထွက်ပေါ်လာဖို့ဆိုစွာကို ယုံကြည်ပါရေ။
ရခိုင်ပြေမြို့နယ်အားလုံးမှာဟိရေလူငယ်တိကို တစ်မြို့က ၂ ယောက်စီတတ်ရောက်ခွင့်ပီးရေ Social Cohesion သင်တန်းတစ်ခုမှာ တစ်နားထိုင်ဗျယ်နားထောင်ဖြိုက်တေ သင်တန်းသားအဖြိုက်နဲ့တော့မဟုတ် သင်ပြပီးရေဆရာနန့် Mutual respect ထားဆက်ဆံရေ(အပြန်လှန်ဆရာခေါ်ကတ်တေ) ယင်းသင်တန်းမှာ ၅ မိနစ်စာဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုပြပီးရေ ယင်းဗွီဒီယိုဖိုင်မှာ အန္ဒိယနိုင်ငံကလူ အာဖရိကလူ မြောက်ကိုးရီးယားကလူ ပြင်သစ်ကလူ စရေနိုင်ငံအများပြားကလူတိကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပါရေ။
အင်တာဗျူးမှာအန္ဒိယကလူလေ့သော့အိန္ဒိယလူမျိုးဖြိုက်ရစွာဂုဏ်ယူကြောင်း အိန္ဒိယသွီးစစ်စစ်ဖြိုက်ကြောင်း၊အာဖရိက မြောက်ကိုရီးယား ပြင်သစ်စရေလူတိကလေ့သော့ သူရို့တိစွာ အာဖရိကသွီး မြောက်ကိုးရီးယာသွီး ပြင်သစ်သွီးအပြည့်ပါကြောင်း လူမျိုးဖြိုက်ရစွာဂုဏ်ယူကြောင်းအင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုကတ်ပါရေ၊ယင်းလူတစ်ယောက်ချင်းစီးကို DNAစစ်လိုက်တေခါအားလုံးသူကိုအံ့သြသင့်လားစီပါရေ၊အကြောင်းရင်းကတော့ခါ အန္ဒိယလူမျိုးဖြိုက်ရစွာဂုဏ်ယူရေလို့ပြောရေ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား DNA စွာ အိန္ဒိယသွီးက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း အင်္ဂလိပ်လူမျိုးသွီးက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြိုက်နီရေ။အဖိုး အဖီး အဇူ အဇာကနီတဆတ်ဆတ်ရောနှောလာရေပယေ၊တစ်ခြား အာဖရိက မြောက်ကိုရီးယား ပြင်သစ်စရေနိုင်ငံတိကလူတိမှာလေ့ DNA ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တေခါသွီးရောနီစွာတိကိုတွိရရေ။
သင်သန်းသားတိကို Group Presentation လုပ်ခိုင်းရေအခါ ရခိုင်ပြေမြို့နယ်ပေါင်းစုံးကလူငယ်တိ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းထွက်လာရေအသံကတစ်သံတည်းဖြိုက်လားပါရေ ဇာအသံလေးဆိုကေ အားလုံးစွာလူသားတိဖြစ်တေအတွက် လူမျိုးရေးကိုခွဲခြားနီစရာမလို ရခိုင်လူမျိုးဆိုပြီးကေလေ့ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ် ကိုရို့ကရခိုင်သား/သမဖြိုက်ကေ့လေ့ကိုရို့အဖိုးအဖီးအဇူအဇာရို့လက်ထက်မှာသွီးရောချင်ရောလီဖို့စသဖြင့် မျိုးချစ်စိတ်ကိုပုံသွင်းဖျောက်ဖျခံလိုက်ရရေ တစ်နည်းပြောရကေ ပညာရပ်တစ်ခုဧ့ပုံသွင်းခြင်းကို ခံလိုက်ရရေပယေ၊(ယင်းအဖွဲ့စည်းတိကလည်း လူငယ်တိကိုသားကေါင်အဖြိုက်ပစ်မှတ်ထားစွာလေ့ ဖြိုက်ကေါင်းဖြိုက်ဖို့ပယေ)။
ယင်းပိုင်သင်တန်းတတ်ပြီးလားရေ လူငယ်အများစုစွာ ရခိုင်က ချင်းလူမျိုးကိုဇာပိုင်ခွဲခြားဆက်ဆံရေ မူဆလင်တိကိုကဇာပိုင်နှိမ်ရေ မြိုလူမျိုးတိကိုကဇာပိုင်သဘောထားရေစသဖြင့် မတူကွဲပြားရေလူ ကိုယ်ချင်းစာတရားကြီးမားရေလူအဖြိုက်သူရို့ကိုယ်သူရို့ခံယူပနာ လူနှစ်ယောက်ကြားကအနာကိုဆီးထည့်ဖို့မကြိုးစားဘဲ လိုအပ်စာထက်အပိုပြောလို့ကိုယ့်ပေါင်ကိုကိုယ်လှန်ထောင်းလီပါရေ။
## အာဏာရှင်ကို နှင်ထုတ်တဲ့ပွဲ ##
รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Khaing Min Khant-ခိုင်မင်းခန့်ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา
ส่งข้อความของคุณถึง Khaing Min Khant-ခိုင်မင်းခန့်:
အနုပိုင္ညာနန့္စီးဆင္းနီေရ ေဝဒနာ ဥယ်ာဥ္ ေခ်တခု လာလည္ခြင့္ ျကံုလို့ေက်းဇု တင္မိေရ ။